ဘနားနား နဲ့အတူ အနုပညာလောက ကို တကျော့ပြန် ၀င်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အိုင်းရစ်လေပြေဦး - Cele GabarCele Gabar
ဘနားနား နဲ့အတူ အနုပညာလောက ကို တကျော့ပြန် ၀င်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အိုင်းရစ်လေပြေဦး
Published: November 25, 20185:16 pm
အိုင်းရစ်လေပြေဦးဆိုတာ မော်ဒယ်လောက ခေတ်ဦးမှာကတည်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို ခေတ်ကောင်းစားစဉ်မှာလည်း သရုပ်ဆောင်လောကမှာ နေရာတစ်နေရာရခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အသားကျနေခဲ့တဲ့ အိုင်းရင်းတစ်ယောက် ကို ဘနားနားရဲ့ ဗီဒီယို ကန်တော့ပွဲပေးပွဲမှာ အမှတ်မထင် မြင်တွေ့လိုက်ရတာက အံ့သြစရာကောင်းနေပါတယ်။
ကန်တော့ပွဲ ပေးတဲ့ အခမ်းအနားမှာ အိုင်းရစ်လေပြေဦးတစ်ယောက် သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နဲ့ အတူ ပါဝင်ခဲ့တာပါ ။ အောင်မြင်ဖို့ လမ်းစပွင့်လာတဲ့ ဘနားနားလေးကို ၀န်းရံပေးဖို့လား အိုင်းရစ်တစ်ယောက် အနုပညာလောက ကို ပြန်လည်ခြေချဖို့ လားဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျသိရခြင်းမရှိသေးပါဘူး ။ တချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အိုင်းရစ် တစ်ယောက်ကို ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ချင်ကြတာ ပရိသတ်ရဲ့ မေတ္တာတရားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပါ .
Source – Chaink K Ko / Iris Mangchin Par/ Zenn Lynn
ဘနားနား နဲ့အတူ အနုပညာလောက ကို တကြော့ပွနျ ဝငျလာနိုငျခွရှေိတဲ့ အိုငျးရဈလပွေဦေး
အိုငျးရဈလပွေဦေးဆိုတာ မျောဒယျလောက ခတျေဦးမှာကတညျးက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပွီး ဗီဒီယို ခတျေကောငျးစားစဉျမှာလညျး သရုပျဆောငျလောကမှာ နရောတဈနရောရခဲ့သူတဈယောကျပါ ။ အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး ကိုယျပိုငျ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှနေဲ့ အသားကနြခေဲ့တဲ့ အိုငျးရငျးတဈယောကျ ကို ဘနားနားရဲ့ ဗီဒီယို ကနျတော့ပှဲပေးပှဲမှာ အမှတျမထငျ မွငျတှလေို့ကျရတာက အံ့သွစရာကောငျးနပေါတယျ။
ကနျတော့ပှဲ ပေးတဲ့ အခမျးအနားမှာ အိုငျးရဈလပွေဦေးတဈယောကျ သူမရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ နဲ့ အတူ ပါဝငျခဲ့တာပါ ။ အောငျမွငျဖို့ လမျးစပှငျ့လာတဲ့ ဘနားနားလေးကို ဝနျးရံပေးဖို့လား အိုငျးရဈတဈယောကျ အနုပညာလောက ကို ပွနျလညျခွခေဖြို့ လားဆိုတာကိုတော့တိတိကကြသြိရခွငျးမရှိသေးပါဘူး ။ တခြိနျက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အိုငျးရဈ တဈယောကျကို ဖနျသားပွငျပျေါမှာ ပွနျလညျမွငျတှခေ့ငျြကွတာ ပရိသတျရဲ့ မတ်ေတာတရားတဈခုဖွဈကွောငျးပါ .
Previous Previous post: လူထုအကျိုးပြုဇာတ်လမ်း တွေကို ပါ ရိုက်ကူးခွင့်ရတော့မယ့် ဘနားနား
Next Next post: လမ်းမတော်ပွဲဈေးကို ရုပ်ဖျက်ပြီး သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်း
ရိုမက်တစ် ဆန်ဆန် အချစ်နှစ်ပတ်လည် မလုပ်ဖြစ်ရခြင်းကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ချစ်သုဝေ
Published: January 30, 20194:10 pm
ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေး ဖြတ်သန်းခဲ့လို့ ဗမာလို မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Published: December 5, 201810:15 am
မြစ်ကြီးနားပွဲ နဲ့ ရေကြည်မြို့ ပွဲတွေ ပျက်ပြီး နစ်နာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
Published: March 21, 20199:23 am
မင်းသမီးတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ အဆောင်အယောင်တွေတစ်ခုမှ မပါဝင်ပဲသူမနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးမှာ စတုဒီသာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ
Published: April 2, 20195:24 pm Updated: 5:33 pm
ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ခံရပြန်တဲ့ ပန်ကိတ်
Published: November 14, 20182:40 pm